सगुनको मिनि–आइपिओ अबको एक सातामै बन्द हुने
काठमाडौं, चैत्र ४ । नेपालीले अमेरिकामा स्थापना गरेको सामाजिक सञ्जाल सगुन डटकमको मिनी आइपिओ अबको करीब एक सातामै बन्द हुने भएको छ । सगुनले सर्वसाधारणको लागि खुलाएको मिनिआइपिओको आवेदन यही मार्च २७ देखि बन्द गर्न लागेको हो ।
सर्बसाधारणको लागि आवेदन बन्द गरेपछि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मात्रै आवेदन खुल्ला गर्ने कम्पनीले बताएको छ । सगुन गत फेब्रुअर दोस्रो साताबाट सगुनमा लगानी गर्न सक्ने गरी मिनि आइपिओको आवेदन खुल्ला गरेको थियो । त्यसयता चार हजार भन्दा बढीले सेयरको लागि आवेदन गरेको तर करीब १ हजार ७ सय जनाको आवेदन मात्रै पूर्ण रहेको कम्पनीले बताएको छ । अपुरो आवेदनलाई कम्पनीले अस्वीकृत गरेको छ ।
करीब १ हजार ७ सय जनाबाट २० लाख डलर बराबरको सेयरका लागि आवेदन परेको सगुन डटकमले बताएको छ । सगुनको सेयरमा अमेरिका र एशियाली मुलुकबाट लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ ।
कसरी किन्न सकिन्छ सगुनकाे शेयर ?
अमेरिकामा दर्ता गरी गैरआवासीय नेपालीले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनीले विश्वव्यापी रुपमा शेयर आवेदन खुल्ला गरेको यो पहिलो अवसर हो ।
गैरआवासीय नेपाली गोविन्द गिरीले प्रवद्र्धन गरेको सगुन डटकमले केही समय अघि अमेरिकाको ‘जब्स एक्ट’ अनुसार मिनि आइपीओ निश्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो । अमेरिकामा दर्ता भएको स्टार्टअप कम्पनी सगुनले भारतको नयाँदिल्ली र काठमाडौंमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ ।
सर्बसाधारणका लागि मिनी आइपिओको निश्कासन चरण सकिएपछि सगुन आफ्ना प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा लाग्ने सगुन इन्डियाकी स्वाती दयालले बताइन । ‘हाम्रो पाइप लाइनमा धेरै प्रोडक्ट छन्’, उनले भनिन, ‘तिनलाई प्रयोगकर्तासम्म पु¥याउन अब हामी आफ्नो सबै क्षमता प्रयोग गर्नेछौं ।’
सगुनले केही समयमा नै मोबाइल एप्स सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले एप्स डेभलपमेन्टको करीब ५० प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिए । आगामी जुलाई महिनासम्ममा सगुनको एप्स बजारमा आइसक्ने उनले बताए ।
सर्बसाधारणकाे लागि सगुनकाे मिनिअाइपिअाे
सगुनमा लगानीकाे उत्साह बढ्दाे, के हाे सगुन ? कसरी गर्ने लगानी ?